Nepali Christian Bible Study Resources - परमेश्वरका हतियारहरू
» अध्ययन मालाहरू » एक वर्षीय चेलापन पाठ्यक्रम » परमेश्वरका हतियारहरू
हामी एउटा भयङ्कर युद्धमा छौं -- संसार, शरीर र शैतानको विरुद्धमा। बारम्बार लडाइँ र समस्या देखेर हामी छक्क पर्नु पर्दैन। सिपाहीहरू युद्धको रहर गर्दैनन् तर काम उनीहरूको लडाइँ गर्नु हो। हामी स्वर्गमा पुगिसकेका छैनौं, हामी शत्रु-भूमिमै छौं। त्यसैले युद्ध नसक्किएसम्म हामी लडिरहनैपर्छ।
हामी खडा हुने परमेश्वरको सामर्थ्यमा हो; विश्वासीका हतियारहरू परमेश्वरबाटका प्रबन्ध हुन् ("परमेश्वरका हतियारहरू", एफेसी ६:११)। हामी आफ्नै सामर्थ्यमा खडा हुँदैनौं। विजय हाम्रै हो र हामीलाई शैतानको डर मान्नु छैन, तर उसको विरुद्धमा खडा हुनु र जागा रहनु आवश्यक छ।
सुरक्षा दिने कुरा सत्यता हो। यसले सच्चाइ, इमानदारितालाई जनाउँछ। परमेश्वर सत्यका परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँका जनहरू सत्यवादीहरू हुनु आवश्यक छ। तर क्रेटीहरू "सधैं झूट बोल्ने" हरू थिए (तीतस १:१२-१३)। उनीहरू यसमा कुख्यात थिए! तर परमेश्वरको सन्तान कहिल्यै त्यसरी चिनिनुहुँदैन।
शैतानले हाम्रो विश्वासमाथि अविश्वासका वाणहरू वर्षाउँछ। ती वाणहरू अग्निमय छन्, यसको मतलब ती निर्दयी छन्, घातक छन्, कडा छन्, अविरल छन्। शैतानले परमेश्वरमाथि राखिएको विश्वासीको विश्वासलाई आक्रमण गर्छ। उसले परमेश्वरको चरित्रमाथि आक्रमण गर्छ, जस्तो उसले हव्वासित गर्‍यो। उसलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न, उसलाई परमेश्वरले परित्याग गर्नुहुनेछ, उसलाई परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्न, उसका प्रार्थनाहरूको जवाफ परमेश्वरले दिनुहुन्न, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्न, परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू सत्य छैनन्, परमेश्वरलाई खुशी पार्नु र ख्रीष्टियन जीवन जिउनु सम्भव छैन, परमेश्वर अविवेकी (unreasonable) हुनुहुन्छ, उहाँ निर्दोलाई तर्साउने प्रवृत्तिको हुनुहुन्छ, परमेश्वर हामीलाई खालि दुःख दिन चाहनुहुन्छ भनेर शैतानले विश्वासीलाई पत्यार पार्न चाहन्छ। जन बन्यान (John Bunyan) ले आफ्नो पुस्तक "यात्रीको प्रगति" (Pilgrim's Progress) मा आफू नयाँ विश्वासी हुँदा शैतानको अविश्वासका वाणहरूसितको उसको भयानक लडाइँलाई बयान गरेका छन्। शैतानले परमेश्वरको वचनमाथि पनि आक्रमण गर्छ जसरी अदनको बगैंचामा हव्वासित उसले गरे।
शैतानले शङ्कारूपी अग्निवाणहरूद्वारा आक्रमण गर्दछ। हामीले अर्काप्रति नराम्रो सोँच राखोस् भन्ने हेतुले त्यसले शङ्का र लाञ्छनाद्वारा आक्रमण गर्छ; हामीलाई माया हाम्रा आफ्नै नातागोताहरू, सबभन्दा नजीकका मित्रहरू र अति योग्य मण्डली अगुवाहरूप्रति समेत हाम्रा मनमा यस्ता भावनाहरू उब्जाउन खोज्छ। हामीले बिर्सनुहुन्न, शैतान "भाइहरूलाई झूटा दोष लगाउने" दियाबलस हो (प्रकाश १२:९-१०)। शङ्कालाई सत्यद्वारा जाँच्नु नै विजयको उपाय हो। कुनै कुरा सत्य भएको प्रमाण नभेटिएसम्म त्यसलाई विश्वास नगर्नुहोस्, चाहे त्यो आफ्नै विचार होस् वा तपाईंले सुनेको वा पढेको कुरा होस्। साथै हामीले आफ्ना हृदयहरूलाई अरूहरूप्रति कोमल र कृपालु राखेर शैतानका शङ्कारूपी अग्निवाणहरूमाथि विजय बन्छौं (२ कोरिन्थी २:१०-११)।
विश्वास केवल परमेश्वरको वचनबाट आउँछ (रोमी १०:१७)। त्यसैले नै हो बाइबलसित विश्वासीको घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ -- त्यसलाई पढ्दै, अध्ययन गर्दै, सुन्दै, कण्ठ गर्दै, मनन गर्दै। तपाईंले जति राम्ररी बाइबल जान्नुहुन्छ त्यति नै राम्ररी तपाईं शैतानबाटका अविश्वासका वाणहरूसित लड्न सक्नुहुन्छ। येशूले यसरी नै शैतानमाथि विजय प्राप्‍त गर्नुभएको थियो (लूका ४:१-१२)।
यो ढाल प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ। यसलाई "उठाऊ" भनिएको छ। हामी त्यत्तिकै उभिरहनुहुन्न, लुक्नुहुन्न; हामी शैतानको अखडाभित्र छिर्नुपर्छ र उसका फौजसित प्रत्यक्ष कुस्ती लड्नुपर्छ र ख्रीष्टका निम्ति विजयहरू हासिल गर्नुपर्छ।
विश्वासी आफ्नो मुक्तिमा निश्चित हुनु नै यो टोप हो, र शैतानको सबभन्दा तीब्र आक्रमणको निशाना यही बिन्दुलाई बनाइएको हुन्छ। "परमेश्वरले तिमीलाई प्रेम गर्दैनन्; तिमी ख्रीष्टमा सुरक्षित छैनौ; तिमी मूल्यहीन छौ; तिंमी होशियार भएनौ भने परमेश्वरले तिमीलाई त्याग्न सक्छन्; तिम्रो पाप गराइले परमेश्वर थाकिसकेका छन्।" नयाँ जन्म पाएको विश्वासीले मुक्ति गुमाउन सक्छ भन्ने शिक्षाले यस टोपलाई कमजोर तुल्याउँछ। यस टोपलाई राम्ररी लगाउने हो भने विश्वासीले आफ्नो मुक्तिलाई बुझेको हुनुपर्छ। उसको मुक्ति पूर्ण र दामरहित होस् भन्ने हेतुले तिरिएको त्यो ठूलो मूल्यलाई उसले बुझेको हुनुपर्छ। उसको मुक्ति एउटा दान हो, अर्थात् परमेश्वरको अनुग्रहले दिलाएको हो, भन्ने कुरा उसले बुझेको हुनुपर्छ। नयाँ गरी जन्मनु भनेको के हो भनेको उसले बुझेको हुनुपर्छ र आफू नयाँ गरी जन्मेको छु भन्ने कुरामा ऊ निश्चित हुनुपर्छ। विश्वासीले अनुग्रह, विश्वास, दान, धर्मी ठहराइनु, प्रायश्चित, उद्धार, मिलाप, आशा जस्ता बाइबलीय सत्यताहरूलाई जति राम्ररी बुझ्दछ उत्तिकै उसको टोप बलियो हुन्छ। त्यसैले यस पाठ्यक्रममा हामीले यी कुराहरूको चर्चा गरेका हौं।
« विश्वास र ख्रीष्टियन जीवन
मण्डली के हो? »